Izindatshana zikaHarleen Dorka Martech Zone
Imibhalo nge UHarleen Dorka
UHarleen Dorka ngumbhali wokuqukethwe onolwazi ogxile kakhulu ezihlokweni eziphathelene nezindlela zedijithali zokuxhumana nokusetshenziswa. Unobuciko obuthile bokuletha imibono nemiqondo yobuholi bokucabanga ezincwadini ezibhaliwe ngokwakha izici ezihleleke kahle nezicwaningiwe ezinhlakeni eziningi zezimboni ezibandakanya: ukumaketha kanye nemithombo yezokuxhumana, izitayela zabathengi, ukuqamba kwezobuchwepheshe, ukuthengisa kanye nokufaka uphawu lokuthengisa nokunye okuningi imikhakha.
NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2020 NgoMsombuluko, Januwari 18, 2021 UHarleen Dorka
Uhlangabezana nephrofayili yemidiya yezenhlalo enesibalo sabalandeli esingaphezulu kwesilinganiso, izinkulungwane zokuthandwa, kanye nesipiliyoni sokubambisana komkhiqizo wangaphambilini - iqhinga noma ukwelashwa? Njengoba inani lemikhankaso yokukhangisa enomthelela liqhubeka nokukhuphuka, akuvamile kakhulu ukuthi ama-brand abe yisisulu senkohliso yama-akhawunti anjalo nabalandeli mbumbulu kanye nezethameli ezingezona iqiniso. Ngokusho kwe-Influencer Marketing Hub: Ukumaketha kwe-Influencer kulindeleke ukuthi kukhule cishe ku- $ 9.7B ku-2020.